နိုင်သူကအမှိုက်ကောက် ၊ ရှုံးသူကတိုက်ဆောက် ၊ ပြည်သူမှာဗိုက်မှောက် သရ၀ဏ်(ပြည်) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
နိုင်သူကအမှိုက်ကောက် ၊ ရှုံးသူကတိုက်ဆောက် ၊ ပြည်သူမှာဗိုက်မှောက် သရ၀ဏ်(ပြည်)
Author: lubo601 | 7:35 PM | 1 Comment |
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် Winner Takes All (နိုင်တဲ.လူအကုန်ယူသည် ) ဟူသောစကားပုံရှိသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော. နိုင်တဲ.သူအကုန်မယူနိုင် ။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသူများ၏ ပထမ ဆုံးဆောင်ရွက်ကြမည်.လုပ်ငန်းစဉ်သည် အမှိုက်ကောက်ဖို.ဟူသော စကားကိုကြားရတော. အားလုံး အံ.သြသွားကြသည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရ ခဲ.ကြသော အောက်မြန်မာပြည်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို အမှိုက်ကောက်ကြရမည်ဟု ညွှန်ကြားချက်ပေးလိုက်သောအခါ ပြည်သူလူထုဘက်မှဝေဖန်သံများသောသောညံသွားလေသည် ။
အများစုကတော. လွှတ်တော်အမတ်များကိုအမှိုက်ကောက်ခိုင်းခြင်းကိုသဘောကျကြသည် ။ လူထုနှင်.တသားတည်းဖြစ်သည် ။ ပြည်သူလူထုစည်းမဲ.ကမ်းမဲ.အမှိုက်ပစ်ခြင်းကို တားဆီးပညာပေးရာရောက်သည် ။ စည်ပင်သာယာမှ အမှိုက်မှန်မှန်ကျုံးကြရန် တဖက်လှည်.ဖြင်.အသိပေးရာရောက်သည်ဆိုခြင်းကြောင်.ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်လည်း ၀န်ကြီးချုပ် လီကွမ်းယုသည် သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကာစက ကိုယ်တိုင်တံပျက်စည်းကိုင်ကာ အမှိုက်ကောက်ဖူးသည်. သာဓကရှိသည် ။ မြန်မာကိုစင်ကာပူလိုဖြစ်ချင်သည်ဆိုလျှင် လေအေးစက်တပ်ထားသော ဧည်.ခန်းထဲမှ ကုလားထိုင်တွင်ထိုင်ကာ ပြောနေရုံနှင်.ဖြစ်လာမည်မဟုတ် ။ အဟုတ်တကယ်အလုပ်လုပ်ကြဖို.လိုမည်ဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူအပါအ၀င်လွှတ်တော်အမတ်များ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ.တွင် ပြည်သူလူထုနှင်.အတူ အမှိုက်ကောက်ပြကြတော.မည်ဆိုတော. တိုင်းသူပြည်သားအတော်များများက သဘောကျကြခြင်းဖြစ်သည် ။ နမူနာအနေဖြင်.လုပ်ပြလျှင်ကောင်းပါသည် ။ သို.သော် လွှတ်တော်အမတ်များသည် အခြားဥပဒေပြုရေး လွှတ်တော်တွင်းလွှတ်တော်ပ တာဝန်များလှသည်ဖြစ်ရာ အမှိုက်ကောက်ခြင်းကြောင်. အဖိုးတန်သောအချိန်များဆုံးရှုံးသွားမှာကိုတော.မဖြစ်စေချင်ပါပေ ။
တကယ်တော. အမှိုက်ကောက်ရမည်.အလုပ်သည် စည်ပင်သာယာ၏အလုပ်ဖြစ်ပြီး ၊ အမှိုက်ကိုစနစ်တကျ စွန်.ပစ်ဖို.တာဝန်သည် ပြည်သူလူထု၏တာဝန်ဖြစ်သည် ။ လူထုကအမှိုက်ကိုစနစ်တကျစွန်.ပစ်ရမည် ။ စည်ပင်သာယာဌာနဘက်က လူတွေ အမှိုက်အလွယ်တကူစွန်.ပစ်လို.ရအောင်အမှိုက်ပုံးများ လူမြင်ကွင်းတွင်ပေါပေါသီသီချထားပေးရမည် ။ ထို.အပြင် ထိုအမှိုက်ပုံးများကိုလည်း အချိန်မှန်မှန် မပျက်မကွက်နေ.စည်စနစ်တကျသိမ်းဆည်းရမည် ။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံဝယ် လူထုနှင်.စည်ပင်နှစ်ဖက်စလုံးမှစည်းဖောက်လျက်ရှိသည် ။ လူတွေသည်စည်းမရှိကမ်းမရှိ အမှိုက်များကိုတွေ.ကရာနေရာတွင်စွန်.ပစ်ကြသည် ။ တခါတရံ ရန်ကုန်မြို.တွင် နောက်ဆုံးပေါ်ဇိမ်ခံကားအကောင်းစားကြီးတွေပေါ်မှ ကားပြတင်းဖွင်.ကာ အမှိုက်များလမ်းပေါ်သို. ပြီးစလွယ် (ငါ.လက်ကလွတ်ပြီးရော ပုံစံဖြင်. ) ပစ်ချသွားကြတာမြင်တော. ပိုက်ဆံသာချမ်းသာ၍ အသိတရားဆင်းရဲရှာသူများအဖြစ် ဒေါသဖြစ်ရသည် ။ တခါကလည်းကိုယ်ပိုင်ကားတစီးပေါ်မှလမ်းပေါ်သို.အမှိုက်များပစ်ချရာ ထိုကားနောက်မှပါလာသော စက်ဘီးစီးလာသည်.နိုင်ငံခြားသားတယောက်သည် အမှိုက်များကို ပြန်ကောက်ကာ မီးပွိုင်.တွင်ထိုကားပိုင်ရှင်အားလိုက်ပြန်ပေးသည်ကိုလည်းတွေ.ခဲ.ရသည် ။ မြန်မာတယောက်အနေနှင်.ထိုအပြုအမူများကိုအလွန်ရှက်ရွံ.မိပါသည် ။
တခါကလည်း ကျွန်တော်သည်နိုင်ငံခြားသားများနှင်. ဗန်းမော်မှ မန္တလေးသို. ခရီးသည်တင်လူစီးသင်္ဘောဖြင်.စုန်ဆင်းချလာရာသင်္ဘောပေါ်တွင် အမှိုက်ပုံးလည်းမရှိ ၊ မြစ်ထဲသို.လည်း အမှိုက်မစွန်.ပစ်ချင်သောနိုင်ငံခြားသာများသည် ကြွပ်ကြွပ်အိပ်ကြီးတလုံးထဲတွင်တစ်လမ်းလုံးသူတို.၏ အမှိုက်များကိုစနစ်တကျထည်.သွင်း လာကြပေသည် ။ ကျွန်တော်တို.ထင်သည်မှာ သဘောင်္ပေါ်တွင်အမှိုက်ပုံးမရှိသော်လည်း ဆိပ်ကမ်းသို.ရောက်လျှင်တော. အမှိုက်များကိုသဘောင်္ပေါ်မှအလုပ်သမားများက လာသိမ်းကာစနစ်တကျစွန်းပစ်လိမ်.မည်ဟုယူဆခဲ.ကြပါသည် ။ သို.နှင်. နောက်တရက်တွင်မန္တလေးဂေါဝိန်ဆိပ်ကမ်းသို. သင်္ဘောဆိုက်ကပ်သောအခါ အလုပ်သမားတယောက်ကကျွန်တော်တို.အဖွဲ.စနစ်တကျစွန်.ပစ်ထားသော ကြွပ်ကြွပ်အိပ်ကြီးကို လာကြည်.ကာ ဘာမပြောညာမပြောနှင်. မြစ်ထဲသို.ပစ်ချလိုက်ပေသည် ။ ထိုအခိုက်ဝယ်ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံခြားသားများကိုမျက်နှာမပြ၀ံ.တော.လောက်အောင်ရှက်ရွံ.မိပါသည် ။ထိုသို.မြစ်ထဲသို.ပစ်ချချင်လျှင်ဖြင်. ဗန်းမော၊်ကသာ၊မန္တလေးခရီးစဉ်တလျှောက်ကျွန်တော်တို.သည် အဘယ်.ကြောင်.အမှိုက်များကိုအပင်ပန်းခံကာသယ်လာကြဦးမည်နည်း ။
မြန်မာတော်တော်များများအတွက် မြစ်များ ၊ချောင်းများ ၊ မြောင်းများသည် အမှိုက်ကန်ကြီးသဖွယ်ဖြစ်နေသည်မှာ အတော်ကိုပြင်ရခက်သောကိစ္စဖြစ်နေပေသည် ။ ကျွန်တော်တွေ.ဖူးသော နိုင်ငံခြားသား အားလုံးနီးပါးသည် အမှိုက်ပစ်ရာတွင်အလွန်စည်းကမ်းရှိကြပါသည် ။ ကိုယ်စားသော သကြားလုံး ၊ချိုချဉ်အခွံတခုကိုပင်လျှင် အမှိုက်ပုံးမတွေ.ပါက ဘောင်းဘီအိပ်ထဲတွင်ထည်.ယူလာပြီး အမှိုက်ပုံးတွေ.မှစွန်.ပစ်ကြပါသည် ။ငှက်ပျောခွံစသည်တို.ကိုလည်း လမ်းဘေးတွင်လက်လွတ်စပယ်လွှတ်ပစ်တာမတွေ.ဖူးပါ ။ Tourist ကားမောင်းမည်.ဒရိုင်ဘာများ ၊ တိုးရစ်ဂိုဒ်အသစ်များကို ပထမဆုံးသင်ကြားပေးရသည်မှာ အမှိုက်ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်းမစွန်.ပစ်ဖို.ဖြစ်သည် ။ အမှိုက်ကိုကားပေါ်မှလုံးထွေး၍ပစ်ချခြင်းကို နိုင်ငံခြားသားများသည် အလွန်အထင်သေးကြပါသည် ။ ကျွန်တော်တို.သည် ကမ္ဘာနှင်.ရင်ဘောင်တန်းချင်လျှင် သူတို.၏ကောင်းကွက်များကိုနမူနာယူရမည်ဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်. NLD အမတ်များ အမှိုက်ကောက်မည်ဆိုတော. အားလုံးက၀မ်းသာအားရထောက်ခံခြင်းဖြစ်သည် ။ အမှိုက်ကောက်သလို ၊စနစ်တကျအမိုက်ပစ်ဖို. ၊ စနစ်တကျ အမှိုက်မှန်မှန်သိမ်းဖို.ပါ လိုပါသေးသည် အမှိုက်ဆိုရာဝယ်ကွမ်းတံတွေး ထင်သလိုထွေးကြခြင်းလည်းပါဝင်ပါသည် ။ ။အားလုံးဝိုင်းဝန်း၍လုပ်ကြလျှင်ဖြင်. တဖြည်းဖြည်းနှင်.နိုင်ငံသည် သန်.ရှင်းလာနိုင်ပါ၏ ။ဤကားမြင်ရသောအမှိုက်များဖြစ်သည် ။မြင်ရသောအမှိုက်များမှာဖယ်ရှားရလွယ်၏ ။
မမြင်ရသောအမှိုက်များကား နိုင်ငံရေးအမှိုက်များဖြစ်သည် ။ ထိုအမှိုက်များမှာမြန်မာ.နိုင်ငံရေးလောကတွင် ပလိပ်ရောဂါပိုးလိုပျံ.နှံ.ကျန်ရစ်၏ ။ ခေတ်အဆက်ဆက်က စနစ်တကျမစွန်.ပစ်ပဲ ညစ်ပါတ်ရှုပ်ပွကျန်ခဲ.သော သမိုင်းကြောင်းကို အနိုင်ရ NLD ပါတီသည် ဆက်ခံရှင်းလင်းရတော.မည်ဖြစ်သည် ။NLD သည် အိမ်တလုံးကိုလက်ခံရလိုက်ရာတွင်အသင်.တက်နေနိုင်သော အိမ်သစ်တလုံးကိုရလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ ပြင်စရာတွေပြည်.နှက်နေသော ခြစားနေသည်.အိမ်ဟောင်းတလုံးကိုရလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ပထမဆုံးအနေနှင်. မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိဝန်ထမ်းအဖွဲ.အစည်းအားလုံးသည် လာဘ်ငွေမရလျှင်ဘာမှအလုပ်မလုပ်ပေးချင်သော အချောင်သမားစိတ်ဓါတ်များကိုစတင်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည် ။ ချုံးချုံးကျနေသော ဗျူရိုကရေစီယန္တယားကို NLD သည် စတင်ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည် ။နှစ်ပေါင်းမျာစွာအရိုးစွဲလာသော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူယန္တယားကို ရပ်တန်.အောင်စွမ်းဆောင်ဖို.ဆိုသည်မှာ အတော်ပင်ခက်ခဲပေလိမ်.မည် ။မည်သူမျက်နှာမှမထောက်ပဲနိုင်ငံရေးအမှိုက်များကို ပြစ်ဒဏ်ဟူသောအမှိုက်ပုံးထဲသို. ရဲရဲဝံ.၀ံ.ပြတ်ပြတ်သားသား ထည်.ပစ်ရမည်ဖြစ်သည် ။ဟိုတလောက အခွန်ဦးစီးဌာနမှ အကြီးတန်းစာရေးကြီးတယောက်သိန်း ၁၃၀၀ လာဘ်စားသည်.အမှုဖြင်. ထိုစာရေးကြီးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသတင်းများကြားရ၏ ။ သာမန်စဉ်းစားဥာဏ်ဖြင်.တွေးကြည်.လျှင်ပင် အထက်အရာရှိများမပါပဲ စာရေးကြီးတယောက်သည်ဤမျှများပြားသောငွေကိုလက်ခံပါ.မလားဟုသဘောပေါက်နိုင်သည် ။ အထက်အရာရှိမပါပဲဤလာဘ်စားမှုသည်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေ ။ ကာယကံရှင်စာရေးကြီးကလည်း ဤလာဘ်ငွေမှာအထက်အရာရှိကိုပေးရန်သူလက်ခံယူခဲ.ခြင်းဖြစ်သဖြင်. အထက်အရာရှိများကိုပါစစ်ဆေးပါဟုထွက်ဆိုချက်ပေးသည် ။ သို.သော် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင်. အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် ကျွန်တော်တို.စဉ်းစားသလို မစဉ်းစားပဲတဖက်လှည်.စဉ်းစားတတ်သောဝါသနာရှိလေရာ မီးခိုးကြွက်လျှောက် ပေါ်လာရမည်.အဂတိလိုက်စားမှုတရားခံများမှာ ဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိတော.ပေ ။ ကမ္ဘာ.ဘောလုံးအဖွဲ.ချုပ်တွင်တော. အဂတိလိုက်စားမှုများကိုဆွစ်ဇာလန်အစိုးရနှင်. အမေရိကန်အစိုးရက မီးခိုးကြွက်လျှောက် ဖော်ထုတ်သဖြင်. တနွယ်ငင်တစင်ပါ ဆိုသလို ဖီဖာဥက္ကဌ ၊ ဒုဥက္ကဌ နှင်. အလုပ်အမှုဆောင်များဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်းခံနေရပြီဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလျှင်တော. ဤအမှုမျိုးသည် ဘယ်တော.မှာပေါ်မှာမဟုတ်ချေ ။ ထို.ကြောင်. NLD သည် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူအမှိုက်များကို ရှင်းပစ်ရမည်.တာဝန်ရှိလာပေ၏ ။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတင်မဟုတ် ၊ ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက်ရှုပ်သွားခဲ.သော မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ၊လက်ပန်းတောင်းတောင်စီမံကိန်း စသည်.စီမံကိန်းများကိုလည်းရှင်းရမည် ။Global Witness အဖွဲ.ကတင်ပြခဲ.သောဖားကန်.ကျောက်စိမ်းတွင်းများ၏နောက်ကွယ်မှ ခရိုနီ ၊အာဏာပိုင်နှင်. တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ.များ၏ အရှုပ်တော်ပုံကိုလည်းရှင်းရမည် ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို. တရားဝင်သဖွယ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဝင်လာကာအာဏာပိုင်နှင်.ပေါင်းကာသစ်များကိုပေါ်တင်ခိုးနေကြသော တရုတ်သစ်သူခိုးများ ၊ ပြည်တွင်းမှသစ္စာဖောက်များ အရှုပ်ဇာတ်လမ်းကိုလည်းရှင်းရပေဦးမည် ။ လွှတ်တော်တွင်းဝယ် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ၊ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ၊ ၅၉ (စ)ပြင်ဆင်ရေး ၊ စသည်တို.ကိုလည်းရှင်းရပေဦးမည် ။ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ၊တိုင်းရင်းသားတို.ဖယ်ဒရယ်အခွင်.အရေးများရရှိရေး စသော ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက် လက်စမသတ်နိုင်ခဲ.သော နိုင်ငံရေး အမှိုက်များကို ကောက်ရဦးမည်ဖြစ်သည် ။ စင်စစ်မြင်နိုင်သောအမှိုက်ထက် မမြင်နိုင်သော နိုင်ငံရေးအမှိုက်က NLD အစိုးရအတွက်ပိုမိုများပြားပေလိမ်.မည် ။ ခရိုနီအမှိုက် ၊လွှတ်တော်အမှိုက် ၊ နိုင်ငံရေးအမှိုက်များကို ရှင်းရပေဦးမည် ။
ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် ရွေးကောက်ပွဲတခုကျင်းပပြီးနောက် အနိုင်ရပါတီက လွှတ်တော်ထဲမရောက်ပဲ ရှုံးနိမ်.သူများဖြင်. လွှတ်တော်ပြန်ကျင်းပခြင်းသည်လည်း မြန်မာတနိုင်ငံတည်းသာရှိပေလိမ်.မည် ။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD က တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရပြီး အာဏာရပါတီ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီကရှုံးသည် ။ သို.သော် ပထမအကြိမ်လွှတ်တော် ဆယ်.သုံးကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကျင်းပတော. ရှုံးသူများကလွှတ်တော်မှာပေါ်လာကြသည် ။ ထူးပေဆန်းပေ၏ ။ နိုင်ငံတကာမှာတော.ရွေးကောက်ပွဲပြီး၍ ခေါ်သော လွှတ်တော်သည် နိုင်သူတို.နှင်.သာ တွေ.ရမြဲဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော. မြင်ဖူးပြီးသားမျက်ခွက်အဟောင်းများ ပြန်ပေါ်လာသည် ။ သူတို.ရှုံးရခြင်းမှာ ဘာကြောင်.ညာကြောင်.ဟု မဟုတ်တမ်းတရားတွေ ထင်ရာမြင်ရာမီဒီယာကိုပြောကြသေးသည် ။ သည်လိုဖြစ်ရသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသောနေ.နှင်. လွှတ်တော်အသစ်ခေါ်သောကာလကို ရက်ပေါင်း ကိုးဆယ် (သုံးလတိတိ )ခွာထားရမည်ဟူသော ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၃ ကြောင်.ဤသို.ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည် ။ သို.သော်ထိုပုဒ်မ၌ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည်.နေ.မှရက်ပေါင်းကိုးဆယ်အတွင်း ပြည်သူ.လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပရမည်ဟုဆိုထားရာ ရက်ပေါင်းကိုးဆယ်ထက်လျော.၍ (ဥပမာတစ်လအတွင်း)လွှတ်တော်ခေါ်ပေးချင်လျှင်ခေါ်ပေး၍ရပေသည် ။ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကအပေါ်တွင်သာမူတည်လေသည် ။
နိုင်ငံတကာတွင်တော. ရှုံးနိမ်.သူများသည် အာဏာလွဲပေးရေးမှတပါး လွှတ်တော်ထဲသို. ဥပဒေပြုရန်ပြန်ဝင်မလာကြတော.ပေ ။ ရှုံးသူများကို ဥပဒေပြုခွင်.အာဏာ ၊ အုပ်ချုပ်ခွင်.အာဏာ ရက်ကိုးဆယ်ထပ်ပေးလိုက်ခြင်းသည် အကောင်းထက်အဆိုးကိုသာဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည် ။ ပြုတ်တော.မှာသေချာနေသော အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲအချို.သည် သူတို.၏လုပ်ပိုင်ခွင်.များကိုအသုံးပြု၍ နိုင်ငံပိုင်အဆောင်အဦများကိုပုဂ္ဂလိကသို.လွဲပေးခြင်း ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင်.စာချုပ်များကိုအလောသုံးဆယ်ချုပ်ဆိုခြင်း ၊ သက်တမ်းစေ.ကာနီးသော ကန်ထရိုက်စာချုပ်များကို နှစ်ရှည်ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခြင်း ၊ လိုင်စင်ချပေးခြင်း ၊ စသည်.မူမမှန်သောလုပ်ငန်းများကို မိမိနှင်. မိမိပါတ်ဝန်းကျင်မှ စီးပွားရေးသမားများအကျိုးကိုကြည်.၍ တရစပ် အချိန်မနှောင်းမီ (မပြုတ်မီ)အားသွန်ခွန်စိုက် မသမာမှုပြုကြတော.မည်ဖြစ်သည် ။ ရာထူးမှမဆင်းမီ ထိုသုံးလသည် ၀န်ကြီးများ ၊၀န်ကလေးများ ၊အရာ၇ှိများအတွက် ထီပေါက်သလောက် ရိုက်စားခွင်ရှာ၍အကောင်ဆုံးကာလကြီးဖြစ်သည် ။ ရွေးကောက်ပွဲဝယ် နိုင်သူကအမှိုက်ကောက်နေဆဲဝယ် ရှုံးနိမ်.ထွက်ခွာရတော.မည်.သူများက တိုက်ဆောက်ကားစီး ဆယ်သက်စားမကုန်သော ခွင်များဆင်ကြတော.မည်ဖြစ်သည် ။ အကယ်စင်စစ် ယခင်ကလည်းစားခဲ.ကြပြီးသားဖြစ်သည် ။ ယခုသော် စားခဲ.ကြသောငါးနှစ်စာနှင်.ညီမျှအောင် နောက်ဆုံးသုံးလတွင်ပုံအော အားစိုက်စားသုံးကြမည်ဖြစ်ကြောင်းကို လွှတ်တော်တွင်ထပ်တိုးတောင်းသော ဘတ်ဂျက်များ ၊ လူမသိသူမသိခွင်.ပြုပေးလိုက်သောဌာနတွင်း စာချုပ်များ ၊ ခွင်.ပြုမိန်.များ ၊ အကြောင်းကြားစာများကသက်သေထူနေပြီဖြစ်သည် ။
သုံးလအတွင်းဆင်းရတော.မည်.လူများက သူတို.လက်စမသတ်နိုင်သောအလုပ်များအတွက်ငွေများ ထပ်တောင်းကြခြင်းမှာရှက်ဖို.ကောင်းလှသည် ။ မကြာခင်ကမှအစိုးရသည် လွှတ်တော်သို.လုပ်ဆောင်ရန်ကတိပေးထားသော လုပ်ငန်း ၈၄ ခုကို မလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင်.ဖျက်သိမ်းပေးပါရန်လာရောက်တင်ပြဖူးသည် ။ အလုပ်လုပ်ဖို.တော. ၈၄ ခုဖျက်သိမ်းသည် ၊ ငွေထပ်တောင်းရာ၌ နိုင်ငံ.ဘဏ္ဍာငွေကို ကျပ်ဘီလျံပေါင်း (၂၄၆၄) ဘီလီယံထပ်တောင်းခြင်းမှာ ဦးခင်အောင်မြင်.ပြောသလို ဇီးသီးဘန်းမှောက်ကြဖို.ပင်မဟုတ် ။ နောက်ဆုံးပိတ်အိပ်နဲ.လွယ်ဆိုသလိုများ ကျင်.သုံးနေကြသလားဟုတွေးမိပါသည် ။တကယ်ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည်အကြွေးနွံထဲတွင်နစ်နေတာကြာချေပြီ ။ငွေသုံးမည်ဆိုလျှင်တပြားတကျပ်ကအစစိစိစစ်စစ်အတိုင်းအထွာနှင်.သုံးသင်.သည် ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် ထင်တိုင်းသုံးခဲ.ကြသဖြင်. ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှု(၀င်ငွေနှင်.ထွက်ငွေမမျှပဲ ပိုသုံးမှု )မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ကျပ်ဘီလီယံ ၇၂၀၀ သို.ရောက်လာကြောင်းသိရသည် (၁ ဘီလီယံမှာ သန်းပေါင်းတထောင်ဖြစ်သည် ၊ဘီလီယံ ၇၂၀၀ ဆိုလျှင်) မစဉ်းစားဝံ.သောငွေများ လိုငွေပြနေတာဖြစ်သည် (၀ါ) မရှိပဲပိုသုံးခဲ.ကြတာဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဟိုချေးဒီချေးဖြင်. အကြွေးယူစားသောနိုင်ငံဖြစ်လာရာ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီပေါင်းမှာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံသို.ရောက်လာပြီဟုဆိုကြသည် ။ ထိုအကြွေးများကိုဆပ်ဖို.လည်း ပြည်သူလူထုနှင်.နောက်တက်လာမည်.အစိုးရအတွက်ခေါင်းခဲစရာဖြစ်သည် ။တကယ်တော.ရှုံးနိမ်.သူအမတ်များသည် လွှတ်တော်အတွင်းဝယ် နောက်ထပ်ရကပေါင်းကိုးဆယ်မဆိုထားနှင်. ကိုးစက္ကန်.ပင်မရှိသင်.တော.ပေ ။
ယခင်လူများကတော. နောက်သုံးလတွင် ( ၂၀၁၆ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ.နောက်ဆုံးထား၍) ဆင်းသွားတော.မည်ဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိဝန်ကြီးအားလုံး ၊ ဗိုလ်ချုပ်အားလုံးသည် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ချမ်းသာကြသူများလား ၊ အောင်ဘာလေထီအကြိမ်ကြိမ်ပေါက်ကြသူများလား ၊ မိန်းမဘက်မှအားလုံးအမွေရကြသည်လားသော.မသိ ။ အားလုံးမချမ်းသာသူမရှိ ။ တိုက်နှင်.ခြံနှင်. ၊ ဘဏ်စာရင်းနှင်. ၊ ကုမ္မဏီနှင်. ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနှင်. စီးပွားရေးတောင်.တင်းကြသူတွေချည်းဖြစ်သည် ။ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးပင်လျှင် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်တွင်တိုက်နှင်.ခြံနှင်.နေနိုင်သည်မှာတော်ရုံတန်ရုံ ကြွယ်ဝမှုမဟုတ်ချေ ။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ချမ်းသာလာလျင်တော. မပြောတတ်ပေ ။ ၀န်ထမ်းလစာနှင်.ရိုးရိုးသားသားစုဆောင်းမည်ဆိုလျှင် လှိုင်သာယာတွင် ပေနှစ်ဆယ် ၊ပေခြောက်ဆယ်မြေတကွက်ပင်ဝယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ ။ NLD လွှတ်တော်အမတ်များကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်သလို အာဏာမရမီ (လုပ်ငန်းခွင်မ၀င်မီ) ပိုင်ဆိုင်မှုနှင်. လုပ်ငန်းခွင်မှ ငါးနှစ်ကြာသောအခါပိုင်ဆိုင်မှုကို စစ်ဆေးသလို သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ လွှတ်တော်အမတ်များ ၊ ၀န်ကြီးများ ၊ဒုဝန်ကြီးများ ၊ အရာရှိကြီးများ ၊ ကိုစစ်ဆေးနိုင်သော် နိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်လိမ်.မည် ။
ချမ်းသာသူက ထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာနေဆဲဝယ် ၊ သာမန်မြန်မာနိုင်ငံသား ပြည်သူလူထုကတော. စားစရာမရှိအောင် တနေ.စာတနေ.ရုန်းကန်နေကြရပြီဖြစ်သည် ။ မိမိနိုင်ငံကိုပစ်၍ေ၇ခြားမြေခြား၌ မျက်နှာအငယ်ခံကာ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာအတွက် မိတကွဲဖတကွဲ သားတကွဲမယားတကွဲ ဖြစ်ကြရှာသူအပေါင်းမှာလည်း မရေတွက်နိုင်အောင်များပြားခဲ.ပြီဖြစ်သည် ။တိုင်းတပါးတွင် မည်သူသတ်မှန်းမသိပဲသေကြသူတွေ ၊ အဓမ္မကျင်.ခံရသောမိန်းကလေးတွေ ၊ ဘ၀ပျက်ကြရသော လူငယ်တွေ ၊ ရေခြားမြေခြားတွင် အကျဉ်းကျခံရသူတွေ ၊ရှမ်းပြည်နယ်နှင်.ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပြေးစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ မိတကွဲဖတကွဲဖြစ်နေရှာသူကလေးငယ်တွေ ၊ နိုင်ငံခြားရှိဒုက္ခသည်စခန်းမှာအကျယ်ချုပ်ဖြင်.ထိမ်းသိမ်းခံထားရသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မရေတွက်နိုင်အောင်ရှိနေကြဆဲဖြစ်သည် ။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ထမင်းတနပ်အတွက် ဖားကန်.တွင်ရေမဆေးကျောက်ရှာရာမှအရှင်လတ်လတ် မြေမြှုပ်သဂြိုဟ်ခံရသူတွေ ၊ အလုပ်ရမည်ဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို. ပို.ဆောင်မှောင်ခိုကူးခံရသူတွေ ၊ ပြည်တွင်းလိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓမ္မခိုင်းစေခံနေရသူတွေ ၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရသူတွေ ၊ တနေ.လုပ်အားခ မြန်မာငွေသုံးထောင်.ခြောက်ရာသတ်မှတ်ထားလင်.ကစားအမျိုးမျိုး ဥပဒေကိုလက်တလုံးခြားလှည်.ပါတ်၍ အလုပ်သမားတွေကိုလုပ်ခလစာပြည်.ပြည်.၀၀မပေးတာတွေ ၊ ကျောင်းနေရမည်.လူမမယ်ကလေးများ စားသောက်ဆိုင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တို.တွင် စားပွဲထိုးနေရတာတွေ ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ နေစရာစားစရာခိုလှုံစရာမရှိသောအဖြစ်အပျက်တွေသည် ရွှေရောင် ငွေရောင်တပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေသော သမ္မတအိမ်တော် ၊ လွှတ်တော်ကြီးများ ၊ တပ်ချုပ်ကြီးရုံးခန်း စသည်.အပြင်ဘက်မှာ ရှိနေ ဖြစ်နေကြပါသည် ။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ထို.ထက်ဆိုးသောအဖြစ်များရှိနေကြပါသည် ။
မြန်မာပြည်သူအများစုဆင်းရဲနေကြပါသည် ။အလုပ်အသွားအပြန်စီးစရာဘတ်စ်ကားပင်ကောင်းကောင်းမရှိပါ ၊ ငါးပိသိပ်ငါးချဉ်သိပ်လိုက်ကြရပါသည် ။မနက်စာနှင်.ညစာကို ပေါင်းစားကြရသူများပင်ရှိနေကြပါသည် ။ နိုင်သူကအမှိုက်ကောက်၍ ရှုံးသူကတိုက်ဆောက်ကားစီးနေကြချိန်တွင် ပြည်သူလူထုကတော.ဗိုက်မှောက်ကာနေကြရပါကြောင်း ။
News Watch စောင်.ကြည်.ဂျာနယ်
သရဝဏ် က စောက်ရူးပါ